Posted by Tranquillus | Jan 20, 2018 | Kobcin xirfadeed
Maaree Wakhtigaaga Shaqada
Shaqadu inta badan waa sheeko! Sida loo bilaabo, iyo gaar ahaan meesha laga bilaabayo? Su'aal ku dhufo calaamadda ... Dhibaato sii kordheysa oo ka jirta bulshadeena halkaas oo shaqadu ay la socoto xawaare iyo wax soo saar.
Hadday ahaan lahayd shaqaale ama maamulaha shirkadda, dhammaanteen waxaan u baahanahay inaan ogaano sida loo maareeyo iyo mudnaanta waqtiga shaqadeena. Nidaamkani waa tallaabo muhiim ah oo ah guulaha hawlaha maalinlaha ah iyo guusha mashaariicda muddada fog.
Ma dooneysaa inaad barato dhammaan furayaasha si aad u maamusho waqtiga shaqadaada? Thanks to video this daqiiqado 3, waxaad ka heli doontaa talo fudud oo laakiin la taaban karo si aad u hubto naftaada leh hawlaha kaa sugaya!
Noqosho wax soo saarka shaqada. Miyaadan ka fekerin waxa ku saabsan? Adigoo raacaya talooyinkan, waxaad arki doontaa in noloshaada xirfadeed ay isbedeleyso.
Fiidiyowgaan, waxaad ka heli doontaa fikrado iyo talooyin kaa dhigi doona shaqaale wax ku ool ah ..., iyo dhammaanba, kaliya 5 waxay tilmaameysaa:
1) Êinaad diirada saarto : Feejignaan, aasaas muhiim ah.
2) Mudnaanta : Ma leedahay hawlo aad u badan oo la sameeyo? Waa wax walba oo ku saabsan barashada si loo abaabulo oo loo kala hormaro ...
3) Si aad u ogaatid sida loo sheegayo maya : mowduuc adag, laakiin lagama maarmaanka u ah maareynta shaqadaada.
4) Dib u dhiska : Waa la joojin karaa dhammaan mashaariicdaada!
5) Qoro warqado : Caado qaadashada si aad u habaysato.
Diyaar ma u tahay inaad si firfircoon u shaqeyso
Maaree Shaqada Wakhti-Wakhti-Fikrado iyo Talooyin May 11th, 2018Tranquillus
horeKa dib guuldaradii ka dib
socdaIlaha ugu Sarreeya ee Barashada Ingiriisiga